Balong 5000: Huawei mbụ 5G modem | Gam akporosis
Huawei gosipụtara Balong 5000, ya 5G modem
Huawei bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị emetụta mmepe nke 5G Gburugburu ụwa. Ezie na China emeputa-abịa gafee ezuru nsogbu Ruo ugbu a. Mana ọzọkwa enwere mba ndị nwere ntụkwasị obi na ika ahụ. A na-atụ anya na ọnwa ndị na-abịanụ ha ga-eweta ekwentị mbụ ha na nkwado maka teknụzụ a. Ọ bụ ezie na maka nke a ga-ekwe omume, ịchọrọ modem. Mọdem a adịlarị gọọmentị.
Ọ bụ ihe gbasara Balong 5000, nke bu ihe ana akpo modem mbu nke Huawei. Companylọ ọrụ ahụ ewepụtara ya na China. Mana ekwuru na anyị nwekwara ike ịtụ anya ngosi na MWC 5 na Barcelona, ​​n'ime otu ọnwa.
Ruo ọnwa ole na ole e kwuru na akara ndị China ga-eweta a ama nwere 5G na MWC 2019. Ugbu a modem bụ ọkwa gọọmentị, ohere ahụ na-aga n'ihu na-abawanye. Maka ugbu a enweghị nkọwa gbasara ama ama kwuru. Banyere Balong 5000, akara ahụ na-akọwa ya modem 5G kachasị ike na ahịa.
Akụkụ bụ isi nke modem Huawei bụ na ọ nwere ike ịkwado ma autonomous (SA) na nke na-abụghị autonomous (NSA) 5G ụlọ ọrụ ntanetị. Yabụ na o nwere ikike ikpuchi netwọkụ niile. Nke a chere na ị dịlarị njikere maka nkenye nke netwọkụ ndị a, ihe ga - eme na 2020.
Maka ugbu a Huawei egosighi nkọwa Balong 5000 niile. Anyị maara na ọ ga-enwe nkwado maka FDD na TDD. Na mgbakwunye, ọsọ ya na-ahapụ ezigbo mmetụta. Ọ ga - enwe ike iru 4,6 Gbps na sub-6Ghz band na 6,5 Gbps na mmWave. Ndị a bụ ma ọ dịkarịa ala nha ndị China emeela. Na mgbakwunye, anyị ga-agbakwunye na ọ na-abịa na nkwado V2X, nkwukọrịta maka njikọ site na ugbo ala.
Ndị a bụ nkọwa niile gbadakwutere anyị ruo ugbu a gbasara Balong 5000, Huawei modem mbụ nke Huawei. Ọ bụrụ eziokwu, na MWC 2019 anyị ga-enwe ike ịmụtakwu banyere ya. Dị ndị China nwere ike igosipụta ụdịrịrịrịrịrịrị ya mbụ. Anyị amaghị, mana anyị nwere olile anya na a ga-enwe ọtụtụ data n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei gosipụtara Balong 5000, ya 5G modem
Ngwa gam akporo iji nweta ihe na Instagram
Vivo APEX 2019: Ekwentị ọhụrụ na-enweghị bọtịnụ, ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ oghere